कोरिया रोजगारी बन्द ! – Sapana Sanjal
June 18, 2021 165
Sapana Sanjal : आम्दानीका हिसाबले आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहेको दक्षिण कोरियाको रोजगारी अझै खुल्ने सुरसार छैन। १५ महिनादेखि कोरिया रोजगारी बन्द छ। कोरिया रोजगारी स्थगित हुँदा रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका करिब १० हजार अन्योलमा परेका छन्।
Prevअब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु खुला हुने !
Nextशान्ति सेनामा योगदान गर्ने राष्ट्रहरुको सूचीमा नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्न सफल
अभागी शिशु जसले आफ्नै आमा देख्न पाएन, बच्चा जन्माएपछि आमाको मृत्यु